အစိုးရဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ အမိန့်ချမှတ်။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » အစိုးရဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ အမိန့်ချမှတ်။
အစိုးရဝန်ထမ်းအားလုံးအတွက် အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ အမိန့်ချမှတ်။
Posted by mG on Mar 22, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Hoax |7comments
ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အစိုးရ ဝန်ထမ်းလစာများ လျှော့မည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကုန်ဈေးှနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုများ ဖြစ်နေခြင်းတို့ကြောင့် ယင်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အစိုးရဝန်ထမ်းလစာများကို လျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက ကြာသပတေးနေ့က ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ချင်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) မှ ကိုယ်စားလှယ် ဦးလဖိုင်ဇော်ခွန်၏ အစိုးရဝန်ထမ်းလစာများ တိုးမြှင့်ပေးရေးနှင့် နိုင်ငံတော် တာဝန်ကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီး သက်ပြည့်ပင်စင်၊ ကျန်းမာရေးပင်စင်တို့ဖြင့် အငြိမ်းစားယူခဲ့ကြသော ပင်စင်စားများအား ပင်စင်လစာများကို တိုးမြှင့်ပေးရန် အဆိုပြုလွှာကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်မှ ဒေါက်တာစိုးစန္ဒာမှ ထောက်ခံခဲ့ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင် ထောက်ခံမဲ ၁၂၈ မဲ ကန့်ကွက်မဲ ၉၄ မဲ၊ ကြားနေမဲ ၂၃ မဲတို့ဖြင့် တင်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့သော်လည်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးက ပြန်လည် ဖြေကြားဆွေးနွေးရာတွင် .. ဝန်ထမ်းလစာများ တိုးမြှင့်ပေးမည် ဆိုတိုင်း ကုန်ဈေးနှုန်းအခြေအနေ၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုတို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါကြောင်း.. ထိုု့ ကြောင့် အခြေ အနေ အချိန်အခါ အလျောက် စဉ်းစားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။ သို့သော ်ယခု အခါမှာ ကုန်ဈေးနှုန်းအခြေအနေနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုများ များစွာဖြစ်နေကြောင်း။ ထို့ကြောင့် ဝန်ထမ်းလစာများကို တိုးမြှင့်ပေးရန်မှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း။ ထိုသို့ တိုးတက်နေသော ကုန်ဈေးနှုန်းကို ထိန်းသိမ်းရန်မှာ ပင်မအချက်အခြာ ဖြစ်နေသော ဝန်ထမ်းလစာကို လျှော့ချရန်သာ ဖြစ်ပါကြောင်း။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် နှစ်ကုန်ပိုင်းဖြစ်သော ၂၀၁၁ ဧပြီလမှ စ၍ ဝန်ထမ်းလစာများကို လက်ရှိလစာ၏ လေးပုံတစ်ပုံအား လျှော့ချပစ်မည် ဖြစ်ကြောင်း။ ပင်စင်စားများဆိုသည်မှာ နိုင်ငံတော်အတွက် အလုပ်လုံးဝ လုပ်မပေးနိုင်တော့သော လူပိုများ သက်သက်သာလျှင်ဖြစ်ပါကြောင်း။ ထို့ကြောင့် ပင်စင်လစာကို တိုးမြှင့်ပေးရန် မဆိုထားနှင့် ယခုလို ပေးနေတာကိုပင်လျှင် နိုင်ငံတော်ကို အထူးကျေးဇူးတင်သင့်ကြောင်း။ မိမိတို့ အနေနှင့် ပင်စင်လစာကို ယခင်က မသိလိုက်မသိဘာသာနေခဲ့ရာမှ ယခုလို လွှတ်တော်၌ အရေးတယူ ဆွေးနွေးလာသဖြင့် သတိပြုမိလာပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း။ ပင်စာလစာများပေးရသည်မှာ နိုင်ငံတော် ဘဏ္ဍာငွေကို လွန်စွာထိခိုက်ပါကြောင်း။ ထို့ကြောင့် ယခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ကုန်မှ စ၍ ပင်စင်လစာများကို လုံးဝ ပေးတော့မည် မဟုတ်ပါကြောင်း။ ဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ လစာလျှော့မည့် သတင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဝန်ထမ်းအသိုင်းအဝိုင်း၌လည်း ဤသို့ ပြောကြပါသည်။
“အစကတော့ မယုံဘူးပေ့ါနော်.. ရုံးမှာ ဝန်ထမ်းအချင်းချင်းပြောကြဆိုကြတာက ဒီသတင်းက ထိပ်တန်းသတင်းဖြစ်နေတယ်။ ညက သတင်းကြည့်လိုက်ရတဲ့ သူက မကြည့်ရသေးတဲ့သူကိုပြော။ ဟဲ့ သတင်းစာဖတ်ကြဦး သတင်းစာ ဖတ်ကြဦးနဲ့ သတင်းစာထဲလည်း သေချာ ပြန်ဖတ်ကြည့်ကြရတာ။ အစတုန်းက အစိုးရ အသစ်တက်လာလို့ လစာတိုးမယ်ဆိုပြီး ဝန်ထမ်းအားလုံးပျော်နေကြတာလေ။ အချို့ဆိုရင် လစာတိုးရင်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံတွေချေးပြီး ကြိုသုံးထားနှင့်ပြီးပြီ။ အခုကျတော့ လစာက မတိုးတဲ့ အပြင်ကို လျှော့မယ်ဆိုတော့ အစိုးရ အလုပ်လုပ်ရတာ အလကားနီးပါး လုပ်ပေးနေရသလို ဖြစ်နေပြီလေ.. တော်သေးတယ် ကျွန်မတို့က ယောက်ျားကစီးပွားရေး လုပ်လို့။ ကျွန်မ လစာက ကျွန်မ ဖိနပ်ဖိုးပဲ ရှိတာလေ။ လစာနည်းတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေတော့ ဒုက္ခပါပဲ။ ခွေးဝမ်းသာအောင် လေလည်ပြတယ် ဆိုတာလို .. အစိုးရသစ်တက်လို့ လစာတိုးမယ်ဆိုတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ မျှော်လင့်ချက်ကတော့ သွားပါပြီရှင်”
“ရုံးမှာတော့ လူကြီးဆီကို စာရောက်ပြီလို့ ကြားတယ်။ သူတို့ အထက်ပိုင်းပဲ ကြိတ် ပြီး တိုးတိုး တိုးတိုး လုပ်နေကြတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့တော့ေသချာမသိဘူး။ ဟုတ်ချင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့။ မန်နေဂျာလည်း မျက်နှာမကောင်းဘူး။ တကယ်လို့ လစာလျှှော့တာ သေချာတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော် အပါအဝင် ကျွန်တော်တို့ ဝန်ထမ်းအငယ်တွေကတော့ ရုံးဆက် မတက်တော့ဘူး အလုပ်ထွက်ကြမယ်။ ”
“ လစာ ကိုလျှော့လို့ ကုန်ဈေးနှုန်းကပါ လိုက်ပြီး လျော့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ တော်သေးတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် အဲ့လို လိုက်မလျော့ရင် ဝန်ထမ်းတွေပဲ ဒုက္ခရောက်မှာလေ။ ဒီ လစာနဲ့တောင် မလောက်မငှ တာ လျှော့ သာလျှော့လိုက်မယ်ဆိုရင် တောင်းစားဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ် ”
“ ကြား မကြားဖူးပါဘူးတော်.. တစ်သက်နဲ့ တစ်ကိုယ် လစာ တိုးတယ်ဆိုတာပဲ ကြားဖူးပါတယ်… ။ ဒီ အစိုးရ လက်ထက်ကျမှ လစာ လျှော့မယ်တဲ့။ တတ်လည်းတတ်နိုင်တယ်။ အေးလေ..။ ဘုန်းကြီးတွေကိုတောင် သတ်တဲ့ အစိုးရပဲ။ ဘာ မလုပ်နိုင်စရာရှိမလဲ။ အကုန်လုပ်မှာပဲ ။ ”
အဲ့တော့ ဘယ်လိုတွေလုပ်ကျမလည်းဆိုတာကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။
“မြန်မာ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကိုဖျတ်ဆီးပြီးနေပြီလေရှင်၊အခုလည်းဘဝတစ်ခုလုံးကို ဖျတ်ဆီးတော့မှာလား။”
“အဲ့လိုတွေတာ ဖြစ်လာရင် ကျွန်တော်တို့လို ဘဏ်ဝန်ထမ်းတွေ၊ပြည်သူတွေက လာသွင်းတဲ့ငွေတွေကိုပဲ ပြန်ခိုးရမှာလား။ဒါမှမဟုတ် အောက်ကြေးတောင်းရမှာလား။ကြည့်လုပ်ပါအုန်းဗျာ။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေဟာ ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလည်း အကြီးစားသူဖုန်းစားတွေလား။”
“အခုသတင်းတွေထွက်နေတာကတာ တကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းအားလုံးနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့အလုပ်ထွက်ကျမယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်ဗျ။”
“ကြားကြတဲ့အတိုင်းပါပဲရှင် ကျွန်မတို့က တမျိုးလုံး၊တဆွေလုံးအစိုးရရုံးဝန်ထမ်းတွေရှင့်၊အဲ့လိုတာ လုပ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ ဘယ်မှာသွားနေရမှာလည်း။ဂျပန်ငလျင်ကယ်ဆယ်ရေးဌာနတွေမှာပဲ သန့်ရှင်းရေးသွားလုပ်ရမှာလား။”
“ဘယ်လိုအစိုးရလည်းကွာ၊ဝန်ထမ်းတွေကထိုင်ကြည့်နေလို့ ဟုတ်နေပြီလို့ ထင်နေတာလားမသိဘူး၊မြန်မာမှာဝန်ထမ်းအင်အားအများဆုံးဆိုတာကို သူသိသင့်တယ်၊သူများနိုင်ငံတွေများဆိုရင် အစိုးရကိုထိုင်ကန်တော့လောက်အောင်ကို အားကိုးရတယ်။အခုမြန်မာက အစိုးရကိုတော့ သူများတိုင်းပြည်တွေ၊နိုင်ငံတွေလိုမဟုတ်ပဲ အသေကိုသတ်ပြစ်မှဖြစ်တော့မယ်ထင်တယ်ဗျာ။”
“မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး ကျွန်ပဲဖြစ်တော့မယ်။ပြောတော့သူ့ကျွန်မခံဘူးတဲ့ ဘာလေး ညာလေးနဲ့၊ရှိသမျှဟာတွေ အားလုံးကို သူများတွေကိုရောင်းစားနေတယ်၊အခုလည်းကုန်တော့မယ် အားလုံး၊အခုနောက်ဆုံး ငွေညှစ်စရာမရှိတော့ ဝန်ထမ်းတွေကို လည်ပင်းညစ်တော့မယ်၊ကျွန်တော်ကတော့ ရှင်းတယ်၊အတည်ပြုတဲ့နေ့မှာတင် အလုပ်ထွက်မယ်။”
“ကျွန်မအထင်ကတော့ ကျောင်းသားအရေးအခင်းမဟုတ်ပဲနဲ့၊အလုပ်သမားသပိတ်ပြန်ဖြစ်လာမယ်ထင်တယ်ရှင့်၊အရင်ကလည်း အဲ့လိုတွေ ဖြစ်လာတော့ ဖြစ်သွားတာပဲလေ။ဝန်ထမ်းတွေက တခြားဘာမှလုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး ရုံးလုပ်ကလွဲလို့လေ။ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ လုပ်တတ်ကျမှာပါ။ လ္ဘက်ရည်ဖိုးလေးပေါ့ရှင်….။”
စသည်ဖြင့်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ရင်တွင်းခံစားချက်တွေကို တင်ပြထားတာပါ။သတင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံထုတ် ခဲမှုန့်သတင်းစာရွက်ကိုဖတ်ရင် သိမှာပါ။ဘာမှတော့ ထွေထွေထူးထူး မဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းရှင်းလေး ရေးထားတာပါ။နိုင်ငံကိုပုတ်ချထားတာမဟုတ်ပါဘူးနော်။သတင်းတွေကို ဆွေးနွေးခန်းပုံစံတင်ပြထားတာပါ။ :S
အိုး မဟာပညာရှငိပါလားနော .
“ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် အစိုးရ ဝန်ထမ်းလစာများ လျှော့မည်”
အဲသတင်းသာအမှတ်ဆိုရင်တော့ မဟာပညာရှင်များရဲ့ဉာဏ်ကို ဘာလုပ်ထားသင့်တယ်လို့ ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူး .
အင်း…နောက်ဆုံး ဖြေရှာမရတော့ သူ့လူသူ လည်ပင်းညစ်တော့တာပါပဲ….ဝန်ထမ်းတွေ မဲပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ အရင်ကမတ်လုံးပေးထားတဲ့လစာတွေပြန်လျှော့တော့မှာပေါ့….
လျှောက်မေးကြည့်တော့ အဲဒါမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ ဟုတ်များဟုတ်နေရင်တော့ …..
လွှတ်တော်ထဲ ဆွေးနွေးထားတယ်ဆိုပြီး ရေးထားပုံက.. .. ရွတ်ပြီးခနဲ့ရေးထားသလိုပဲ..။
satire စာလို့လည်း ပြောနိုင်မှာပေါ့..။
သတင်းအမှန် … မဟုတ်နိုင်ပါဘူး..။
ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ လစာကို အဓိက မထားတာ ကြာလှပေါ့ လို့ပဲ ပြောရလေမလား။
လစာ မလိုသော ဝန်ထမ်းများနှင့် လစာကိုသာ မှီခိုရသော ဝန်ထမ်းများဆိုပြီး ခွဲထားရမလိုပဲ။
အရေးအသား ကြိုက်ပါတယ် .. တကယ်ဖြစ်နေသလိုပဲ .. နောက် ထပ်ရေးရင် သတင်းစာ စာမျက်နှာတွေ ကော်လံ နံပါတ်တွေ ထည့်ရေးပါလား
ရှားလော့ဟုမ်းရဲ့ အိမ်ကို ရှာကြသလို .. ဆားပလင်း နှင်းမောင်ရဲ့ အိမ်ကို သွားကြည့်ကြသလို ဖြစ်ပြီး အရေးအသားမှာ မင်းသိင်္ခ တောင် ရှုံးသွားမယ် .. အဲဒီသတင်းစာလဲ ရောင်းကောင်းဦးမယ် ..